Muxuu Baybalka ka dhahay shabada / duloolinta jirka?
Su’aal: Muxuu Baybalka ka dhahay shabada / duloolinta jirka?
Jawaab: Sharciga Baybalka Hore wuxuu ku amray Yahuuda, “Ha u jarin jirkaagar dhimashada ama aad sameysatid aastaamaha nafsadaada. Waxaan ahay ILLAAHA” (Laawiyiintii 19:28). Marka, xittaa in kastoo aaminayaasha maanta ma hoos yaalaan sharciga Baybalka Hore (Rooma 10:4; Galatiya 3:23–25; Efesos 2:15), xaqiiqda inay jirtay amar ka soo horjeedo shabada waa inay keentaa qaar ka mid ah su’aalaha. Baybalka Cusub ma dhaho wax ku saabsan haddii ama aaminaha uu helayo shabad.
Waxaan ku leenahay amarkaan 1 Butros 3:3–4: “Quruxdaada waa inaysan ka imaanin araga qurux, sida ay u faahfaahiyo qaabka timaha iyo xirashada dahabka ama dhar wanaagsan. Badelkii, waxay aheyd in shaqsigaaga gudaha, quruxda aanan baaba’saneyn iyo ruuxa dagan, taas oo ah qiyam wanaagsan ee aragtida Illaah.” La siiyay, mareenkaan waxaa lagu aadiyay dumarka Kirishtaanka, laakin waxaa jiro mabda’ halkaan ee laga yaabo inay aad ugu haboonaato: lagu magacaabo, muuqaalka banaanka ee qofka waa inuusan ahaanin diirada dareenkeena. Dadaal badan wuxuu galaa “qaabka timaha la tilmaamayo” iyo “dhar wanaagsan” iyo dahabka, laakin taasi ma ahan halka quRuxda dhabta ah ee haweenka ay taalo. Isla qaabkaas , shabada iyo duloolinta jirka waa “araga quruxda,” iyo waa inaan ka taxadarnaa inaad dadaal badan siisid hormarinta “gudaha shaqsiga,” oo aan laga eegin jinsiyadeena.
Sida la xiriirto shabada iyo duloolinta jirka, baaritaan wanaagsan d test is to dwaa go'aansiga haddii aan si daacad ah, oo qalbi wanaagsan, u weydii Illaah inuu u naxariisto oo isticmaal howshaas gaarka ah ee ujeedooyinkiisa wanaagsan. “Marka haddii aad cuntid ama cabtid mar walba oo aad sameysid, ku sameey dhammaan ammaanta for Illaah” (1 Korintos 10:31). Baybalka Cusub si gaar ah uma amro wax ka soo horjeedo shabada ama duloolinta jirka, laakin sidoo kale nama siiso sabab walba ee lagu aamino in Illaah uu rabo inaan is shabadeyno ama duloolinta jirka.
Mabaad’ida kitaabiga muhiimka ah ee arimaha Baybalka uu san si gaar ah u sheegin waa haddii uu qol ka jiro shakiga halka ay qanciso Illaah, kadib waxaa wanaagsan inaanan laga qeybgalin howshaas. Rooma 14:23 wuxuu na xasuusinayaa in wax walba aanan ka imaanin aaminaada ay dambi tahay. Waxaan u baahannahay inaan xasuusano in jirkeena, sidoo kale sida ruuxeena, la yareeyay oo Illaah leeyahay. In kastoo 1 Korintos 6:19–20 uusan si toos ah u isticmaalin shabada ama duloolinta jirka, waxay na siisaa mabaad’i: “Ma ogtahay in jirkaaga uu yahay dhismaha caabudka ee Ruuxa Quduuska, ee adiga kugu jiro, ee aad ka heshay Illaah? Ma tihid nafsadaada; waxaad iibsatay qiimaha. Sidaas darteed ku sharafeey Illaaheey jirkaaga.” Runtaan dhabta ah waa inay lahaataa dhalis dhab ah ee waxa aan ku sameyno iyo halka aan la aadno jirkeena. Haddii jirkeena leeyahay Illaah, waa inaan hubinaa inaan haysano “ogolaanshahiisa” cad ka hor inta aan ku “aastaameynin” shabad ama duloolin jirkeena.